I-FacturaScript: ukwenza ama-invoicing nokubalwa kwemali nge-software yamahhala | Kusuka kuLinux
Ama-invoiceScript: ukwenza ama-invoicing nokubalwa kwemali nge-software yamahhala
Okukhethekile kwami ​​kwansuku zonke ukufaka isandla ezinkampanini izixazululo zomthombo ovulekile ukwenza izinqubo zakho zishintshe, inhloso yami eyisisekelo ukuthi izinkampani zinethuba lokuba nazo isoftware evumelana nemodeli yebhizinisi lakho hhayi imodeli yebhizinisi evumelana nesoftware. Lo msebenzi akulula ngaso sonke isikhathi futhi ufaka phakathi ukuhlaziywa kwamathuluzi amaningi, ukuhlola ikhwalithi yawo, ukusebenza kwawo okunikezwayo, ukusebenza kwawo kanye nokwenyuka kwawo, umphakathi owusekelayo, izinhloso zawo zesikhathi esizayo, ubuchwepheshe abusebenzisayo phakathi kwezinye izici futhi izimfanelo okufanele uzicabangele.
Enye yezidingo ezizenzakalelayo ze izinkampani futhi ngaphezu kwakho konke Ama-SME ngeyakho indawo yokukhokhisa neye-accounting, izinqubo ezibalulekile, eziheha izingqinamba eziningi futhi ngaphezu kwakho konke zikhiqiza inani elikhulu lemibhalo, ukubalwa nokusetshenziswa kwamazinga. Kusukela ekuhlolweni njalo kwezinhlelo zokubalwa kwezimali nezokukhokha, kwaba ukuthi ngihlangane InvoiceScript, ithuluzi elenziwe eSpain futhi elihlangabezana nazo zonke izindlela ezidingekayo zokulicabangela.
1 Yini i-FacturaScript?
2 Izici zeFacturaScript
3 Ungayihlola kanjani i-FacturaScript
4 Ungayifaka kanjani i-FacturaScript
5 Izikripthi Zemibhalo Ye-invoyisi
InvoiceScript Kuyinto a I-Enterprise Resource Planner (ERP), ene- umphathi wobudlelwano bamakhasimende (CRM), eyenziwe nge-PHP enethuba lokuxhuma kulwazi olufana neMariaDB, iMysql noma iPostgreSQL futhi ekhishwa ngaphansi kwelayisense I-GNU / AGPL (I-GNU Affero General Public License) okwenza kube ithuluzi lamahhala nokuba ngumthombo ovulekile.
InvoiceScript Kuhloswe ukuthi kube ithuluzi elingaguqulwa futhi lisetshenziswe ngokushesha, linikeze ama-SME nezinkampani ezinkulu ithuluzi elinamandla nelisebenza kahle ukwenza izinqubo zabo zokukhokha kanye nezokubala imali.
Ukuba ithuluzi elihlanganisiwe, InvoiceScript Kusivumela ukuthi songe isikhathi esiningi futhi sigweme amaphutha nemisebenzi eyimpinda, ngoba zonke izinqubo zifakiwe ku-database eyodwa nethuluzi. Kulula, uma senza i-invoyisi yokuthengisa, ukufakwa kwe-accounting okuhambisanayo kwenziwa ngokuzenzakalela, okungukuthi, izinqubo zokubhalwa kwama-invoyisi ngesandla ziyaqedwa bese kolunye uhlelo (noma ngesandla) kugcinwe ukubalwa kwemali, lesi yisibonelo esincane kepha InvoiceScript ngokuqinisekile yenza izinqubo eziningi eziyindida nezijwayelekile.
Kunezici eziningi ezenzayo InvoiceScript ngaphezu nje Uhlelo lwe-accounting, Ngithanda ikakhulukazi ukuthi kungenzeka ukuthi kunwetshiswe ukusebenza ngenxa yohlelo lwayo olusha lwe- ama-plugin. Ngendlela efanayo, singagqamisa izici ezilandelayo.
Kulula ukuyisebenzisa: Umugqa wokufunda we InvoiceScript Incane kakhulu, ukusetshenziswa kwayo kanye nobulula be-interface yayo kwenza kube lula kubasebenzisi ukujwayela ithuluzi, ngaphezu kwalokho, inezinhlobo ezilula eziqukethe izinketho ezibalulekile kuphela, ezigcina isikhathi lapho zifunda ukuyisebenzisa.
Iyatholakala: Singakwazi ukufinyelela InvoiceScript Kusuka noma yikuphi ukufinyelela kwiseva lapho isingathwa khona, kuphendula ngokuphelele okusivumela ukuthi sikubuke kahle kusuka kukhompyutha, ithebhulethi noma i-smartphone yethu.
Ukuvuselelwa Okuqhubekayo: Inomphakathi omkhulu neqembu lobuchwepheshe lesikhathi esigcwele elibhekele ukudala, ukulungisa, ukuguqula nokwenza ngcono leli thuluzi nsuku zonke. Impendulo yomsebenzisi ibalulekile, ngakho-ke izici ezintsha zihlala zithuthukisa noma zengeza izimfanelo amanye amathuluzi wokukhokha angenazo.
Ukuhlangana nabantu besithathuOkwamanje kukhona ukuhlanganiswa kweFacturaScript nePrestaShop, iWooCommerce, i-UberCart phakathi kwabanye, ngendlela efanayo, ngokuba ngumthombo ovulekile futhi nezixhumi, singakuhlanganisa kunoma yimaphi amathuluzi ethu.
Ama-plugins angaphezu kwama-60 ukukhulisa ukusebenza kwawo.
Ungayihlola kanjani i-FacturaScript
Singalihlola kalula leli thuluzi ngokungena kufayela le- Idemo Yomphakathi, sifake i-imeyili yethu futhi saqala ukujabulela indawo yokuhlola enemininingwane eyanele nakho konke ukusebenza okusebenzayo.
Ungayifaka kanjani i-FacturaScript
I-FacturaScript ngokuyisisekelo uhlelo lwewebhu, njengebhulogi, nokuyifaka udinga iseva yewebhu. Ungayifaka kukhompyutha yakho, noma ungayifaka efwini (ukusingathwa) futhi uhlale unayo online noma kuphi emhlabeni. Ukuyifaka ku-Gnu / Linux kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo
Landa ifayela le- inguqulo yakamuva ye-invoiceScript
Vula ku-server yakho.
Vula isiphequluli sakho bese uya ku-URL yakho ukulandela izinyathelo zesifaki.
Umsebenzisi wenziwa ngokuzenzakalela admin ngephasiwedi admin.
Ngokufanayo, iqembu le- InvoiceScript ilungiselele isifundo sevidiyo ngakho.
Izikripthi Zemibhalo Ye-invoyisi
Enye yamandla aleli thuluzi ukuthi linenala imibhalo ku-FacturaScript, amabhukwana wabasebenzisi nonjiniyela, isiteshi se-youtube kanye no isithangami lapho singashiya khona ukungabaza nokukhathazeka kwethu.
Akungabazeki ukuthi iyithuluzi elibanzi, elikhulayo, elinenkululeko yekhodi, enembile, elinokusebenza okuningi nomphakathi obanzi kakhulu, engingabazi ukuthi kufanele sizame futhi silisebenzise ezinkampanini zethu nasemabhizinisini ethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ama-invoiceScript: ukwenza ama-invoicing nokubalwa kwemali nge-software yamahhala
Okuthile engingakuthandi ngemibhalo yama-invoice ukuthi kufanele wenze i-chmod noma + w kuso sonke isiqondisi. Lokho akubonakali kubucayi noma kungaphephile kimi. Noma banaso esinye isinxephezelo esikhokhelayo, ezingeni lokuphepha?
Sawubona wonke umuntu,
Ngabe kukhona umuntu owake wazama le software futhi ungakholelwa yini ukuthi iyabambelela nokuthi ingasebenzela iSME encane?
Nginesicelo sokuqalisa uhlelo lwe-cotability ne-POS lwesitolo sezingubo ze-flamenco, ukuthunga, njll.
Angazi ngawe, kepha ngisebenzisa uhlelo lokukhokha ngewayini futhi futhi limahhala, okungukuthi, alwenzi ukubalwa kwemali ngokuzenzekelayo kodwa lusebenza kahle kakhulu futhi silusebenzise unyaka no-1, ngiyakuhalalisela ngomzamo wakho, kodwa ukukhokhela okuthile enginakho mahhala. IGoogle ngiyithole, ngiyaphinda ngiyisebenzise neWine. 🙂
Pipo. Kubonakala kimi ukuthi awuqondanga lutho.
Yini okufanele uyikhokhe?
Javier Trujillo kusho
Sanibonani nonke! Bengingumsebenzisi we-Facturascript iminyaka futhi iqiniso ukuthi lizifeza ngokuphelele izidingo eziyisisekelo zenkampani yami. Nginesitolo samakhompyutha. Ukubingelela.
Phendula uJavier Trujillo
Ngibone lo demo futhi angiqondi lutho. Okungenani imibiko engiyisebenzisayo angiziboni izinketho zayo. Amandla ami ayabalwa. Kade ngisebenzisa uhlelo oluhle kakhulu olubizwa ngokuthi iMenenja isikhathi esithile futhi mangisho ukuthi lungimangaze kakhulu. Ngaphandle kwalokho ikhula njalo futhi ithuthuke kakhulu selokhu ngaqala ukuyisebenzisa. Inenguqulo yedeskithophu (mahhala) kanye neseva (hhayi mahhala). Kuze kube manje, ngisebenzisa inguqulo yedeskithophu angikudingi lutho. Ngokusobala okuwukuphela komehluko phakathi kwedeskithophu neseva ukuthi kuseva ungadala abasebenzisi futhi ubanikeze izimvume ezithile zomsebenzisi ngamunye. Njengoba angikudingi lokho, ngiqhubekile nenguqulo yedeskithophu. Uma unesikhathi sokukuqinisekisa, ngicabanga ukuthi ngeke udumazeke, okungenani kulabo abafuna enye indlela enhle yezinhlelo zokubalwa kwemali ku-Linux, ngoba azikho izinketho eziningi ezinhle ezilula futhi ezisebenziseka kalula. Bengisebenzisa ama-Quickbook ne-Sage isikhathi eside ngoba izinhlelo ze-Linux bezingahlangabezani nengikudingayo (ngiyi-accountant), kepha empeleni, ngenxa yalolu hlelo, kubonakala ngathi sengivele ngikutholile engikudingayo.
Ngicabanga ukuthi abanye abazi ukuthi bahlukanise kanjani phakathi kwamahhala nokukhululekile, iMenenja yokuthi yimaphi ama-akhawunti angahle abe mahhala kepha akubonakali ngathi akhululekile, futhi ama-invoicecript akhululekile futhi amahhala yize bethengisa ukwenza ngezifiso (kufanele baphile ngokuthile uma akuyona isoftware eningi engaphila ukukhangisa ekhasini layo lokulanda).
Yonke isoftware yebhizinisi kufanele ikhokhise uma ufuna okuthile okunakekelwa, okunezela ukusebenza kahle lapho kushintshwa imithetho yezomthetho, njll. Futhi lena, ngaphezu kokukhululeka, iyi-multiplatform, isebenza kunethiwekhi, iyasabazeka, njll. izinto ezingenazo eziningi futhi-ke ngiyangabaza ukuthi inayo mahhala futhi hhayi mahhala.
ziordia68 Nginesiqiniseko sokuthi unephutha, buza kuwebhusayithi yeFacturaScript ngoba noma ngubani oyiqalile wazi okuningi futhi uqinisekile ukuthi uhlangabezana nazo zonke izidingo zokuphepha ezidingekayo: https://www.facturascripts.com/#testimonials
Ngicabanga ukuthi okokufundisa akucaci kahle
Uma kwenzeka noma ngubani enentshisekelo, anensizakalo yokubamba mahhala enama-invoicecript, isoftware yamahhala nokusingathwa kwamahhala, ngohlelo oseluvele lusetshenzisiwe. Ngale ndlela unohlelo lokukhokha lwamahhala ngokuphelele emafini.
Uyazi yini ehambisana nama-invoice we-SAT 3.3?
Ungayakha kanjani futhi uyiphrinte isikhwama seBitcoin ku-GNU / Linux
Ungawakha kanjani amakhasi ewebhu ngokushesha futhi kalula nge-Grav